ICECREAM SCREEN RECORDER 5,32 အခမဲ့ DOWNLOAD - PROGRAM ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 2019
Icecream Screen Recorder 5,32
vcruntime140.dll - ++ 2015 ပြန်လည်ခွဲဝေမှု Visual C အစုတခုနှင့်တကွကြွလာတော်မူသောစာကြည့်တိုက်။ ကျနော်တို့ကဆက်စပ်အမှားများကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်အဖြစ်နိုင်သမျှအရေးယူစာရင်းပြုစုခြင်းမပြုမီ, ကဖြစ်ပျက်နေသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သောကြည့်ရှုကြကုန်အံ့။ Windows ကိုငါ၏အမှုစနစ်ဖိုင်တွဲထဲမှာ DLL ကိုမတှေ့နိုငျသောအခါဒါဟာကိစ္စများတွင်ပုံပေါ်ဒါမှမဟုတ်ဖိုင်သူ့ဟာသူရှိပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အလုပ်လုပ်အခြေအနေတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဤသည်က၎င်း၏ Third-party အစီအစဉ်များသို့မဟုတ်မတိုက်ဆိုင်မူကွဲတစ်ခုပြုပြင်မွမ်းမံမှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
အစဉ်အလာ, အပိုဆောင်းဖိုင်တွေကဒီအစီအစဉ်အတွက်ထောက်ပံ့ရပါမည်, ဒါပေမယ့်အရွယ်အစားလျှော့ချဖို့, သူတို့ကတခါတရံတွင်တပ်ဆင်ကိရိယာအစုံတွင်ထည့်သွင်းမထားပေ။ ဒါကြောင့်ဖိုင်စနစ်အတွက်လက်ဆောင်မပါသောအခါထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်လိုအပ်ပေသည်။ သင်တို့သည်လည်း, သင်တန်း, ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်လက်ရှိဖြစ်ပါတယ်ဆိုလျှင်, သင့် antivirus program က quarantined မဟုတ်ပါလျှင်ကြည့်ရှုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သင်တို့သည်နောက်တဖန်ပေါ်လာသည်ဒီအမှားနှုနျးနိုငျသောမှကိုင်တွယ်များအတွက်အမျိုးမျိုးသောရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ vcruntime140.dll ၏အမှု၌သငျသညျကို Microsoft Visual C ++ 2015 ပြန်လည်ခွဲဝေမှုကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်ထိုကဲ့သို့သောစစ်ဆင်ရေး၏အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက်အထူးဖမ်းယူနားဆင်သော program တစ်ခုသုံးပြီး၏ထို option ရှိသေး၏။ ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးဒေါင်းလုပ် DLL ကိုကမ်းလှမ်းတဲ့ site ပေါ်တွင် vcruntime140.dll file ကိုရှာတွေ့ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါကကို web site ကိုရှိပါတယ်, နှင့်၎င်း၏အခြေစိုက်စခန်း အသုံးပြု. စာကြည့်တိုက်များတပ်ဆင်ပြီးသူတစ်ဦးကို client ဖြစ်ပါတယ်။
vcruntime140.dll ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ဒီ application ကိုသုံးစွဲဖို့, သင်ဖို့လိုအပ်:
တော်အောင်ပြုပြင် vcruntime140.dll ရှာဖွေရေး၌တည်၏။
ထိုအလျှင်သင်တိကျတဲ့ DLL ကိုလိုအပ်ပါတယ်, ပြီးတော့ဒီလိုအခွင့်အလမ်းရှိသည်။ ဒီဆော့ဗ်ဝဲထဲမှာ mode ကို switch ကိုရှိပါတယ်: သူတို့ကိုသုံးပြီး, သင်သည်သင်၏ဖိုင်များကိုကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းကိုတွေ့မြင်နှင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ သငျသညျတစျဦးစာကြည့်တိုက်ကို install လုပ်ထားတတ်ပါလျှင်ဤသည်လိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်ပေမယ့်အမှားနေဆဲပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းကြိုးစားကြဖို့လိုပါတယ်နှင့်ဖြစ်ကောင်းကြောင့်သင့်ရဲ့အခွအေနေဘို့ပဲမှန်သည်။ ဒီအဘို့လိုအပ်ပါသည်ကားအဘယ်သို့:
အဆင့်မြင့် mode မှာလျှောက်လွှာသို့ပြောင်းပါ။
အခြားရွေးချယ်စရာကိုရွေးချယ်ပါနှင့် vcruntime140.dll ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "၏ဗားရှင်းကို Select လုပ်ပါ".
လိပ်စာ vcruntime140.dll တပ်ဆင်ခ Specify ။
ထိုအခါစာနယ်ဇင်း "ယခု Install".
Method ကို 2: Microsoft က Visual C ++ 2015
Microsoft က Visual C ++ 2015 Visual Studio ကဖန်တီးသောဆော့ဖ်ဝဲမှန်ကန်သောစစ်ဆင်ရေးသေချာကြောင်းကို Windows components တွေကို add နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ vcruntime140.dll အတူအမှား fix စေရန်, ဒီအထုပ်ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်သင့်လျော်သည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုကိုယ်တိုင်ကပျောက်ဆုံးနေတဲ့စာကြည့်တိုက်ပေါင်းထည့်ပြီးမှတ်ပုံတင်ကိုင်ထားမည်ဖြစ်သည်။ အဘယ်အရာကိုမျှပိုမိုလုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Microsoft Visual C ++ တို့အထုပ် 2015 Download
32 နှင့်အတူစနစ်များနှင့် 64-bit နဲ့ပရိုဆက်ဆာအဘို့ - နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသော installation ကိုရှေးခယျြစရာရှိပါတယ်။ သင်သည်သင်၏စနစ်၏ bit နဲ့မသိလျှင်, ကဖွင့်လှစ် "Properties ကို" icon တစ်ခုအခြေအနေတွင် menu ကနေ "ကွန်ပျူတာ" Desktop ပေါ်မှာ။ bit သင့်ရဲ့ system ပေါ်တွင်သတင်းအချက်အလက်များ box ထဲမှာစာရင်းပါလိမ့်မည်။
အသီးသီး h64 - 32-bit နဲ့စနစ် h86 ဂျ, 64-bit လိုအပ်သည်။
ထိုးသွင်း၏ဖြန့်ဝေ၏ installation စတင်ပါ။
installation ကိုပြည့်စုံပင်ဖြစ်သည်ပြီးနောက် vcruntime140.dll စနစ်ထဲမှာထည့်ထားမည်ဖြစ်ပြီးထိုပြဿနာကိုပြေလည်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာတွင်က 2015 ပြီးနောက်ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ဗားရှင်း, ဟောင်းဗားရှင်းကို install မပေးနိုငျကွောငျးပွောဆိုရန်လိုအပ်ပေသည်။ သင်သည်ထိုသူတို့ကတဆင့်ဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်ပါတယ် "Control Panel ထဲက" ပြီးတော့ 2015 ဗားရှင်းထည့်သွင်းပါ။
နယူး packages များအမြဲအဟောင်းတွေဗားရှင်းကိုအစားထိုးကြသည်မဟုတ်, ထို့ကြောင့်သူက version ကို 2015 ၏အားသာချက်ယူရန်လိုအပ်ပေသည်။
Method ကို 3: ပူးတွဲ vcruntime140.dll
vcruntime140.dll မပါဘဲ Third-party application များ install လုပ်ဖို့, သင်ကဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးမှာ directory ထဲတွင်ထားပါရန်လိုအပ်ပါတယ်:
အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း, သင်တို့အဘို့အဆင်ပြေတဲ့လမ်းကကူးယူသို့မဟုတ်ရွေ့လျား by:
Address ကိုမိတ္တူ DLL file တွေကို Visual C ++ ပြန်လည်ခွဲဝေမှုအထုပ်၏ installation နှင့်အတူအမှုသည်အတိုင်း, အဖြစ်ကောင်းစွာပြောင်းလဲသွားတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, 64-bits Windows7သို့မဟုတ် Windows 10 bit နဲ့အတိမ်အနက်ကတော့နည်းနည်း x86 Windows နဲ့အတူတူထက်တပ်ဆင်ခြင်းများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောလိပ်စာရပါလိမ့်မယ်။ သင်၏ operating system ပေါ်တွင် မူတည်. ဘယ်လောက်နဲ့ DLL ကို install လုပ်ဖို့ဘယ်အရာကိုအရပျ၌ပေါ်တွင်ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သင်သည်ဤဆောင်းပါးကနေသင်ယူနိုင်ပါတယ်။ စာကြည့်တိုက်မှတ်ပုံတင်ရန်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြားဆောင်းပါးဖတ်ရှုပါ။ ဒါကလုပ်ထုံးလုပ်နည်းပါကများသောအားဖြင့်မလိုအပ်ပါ, ပုံမှန်မဟုတ်သောအခြေအနေများတွင်လိုအပ်ပေသည်။
ဗီဒီယို Watch: How to Download Icecream screen Capture Recorder532 (စက်တင်ဘာလ 2019).